FBI yakabhadhara "grey-ngowani" boka kuvhura iPhone 5c | IPhone nhau
Iyo FBI haina kubhadhara Cellebrite, asi pane "grey ngowani ngowani" boka kuvhura iro remagandanga iPhone 5c
That the FBI pakupedzisira akakwanisa kuvhura iyo iPhone 5c yeSan Bernardino sniper yaive chinhu chaitozivikanwa. Zvaitendwawo kuziva kuti ndiani akamubatsira kuita basa iri, kambani yeIsrael Cellebrite, asi izvo zvaingove runyerekupe. Izvozvi zviri kutaurwa kuti uyo akabatsira kutevedzwa kwemutemo kweUS aive yakazvimirira hacker boka isina zita kana kambani inomiririra.
The Washington Post, ichidudza masosi padyo nenyaya iyi, inoti iro risingazivikanwe zita revabiridzi rakagamuchira mari kamwe chete kwe yokubiridzira Parizvino zvisingazivikanwe iOS iyo yaishandiswa kuwana Syez Rizwan Farook's iPhone 5c. Panguva ino hazvizivikanwe kukuvara kwavanoshandisa, asi masosi anoti iyo agency yakatora mukana pachikanganiso che software kugadzira Hardware solution yakaremadza pakaunda yekuyedza kunogona kuitwa kana uchipinda iko kodhi mu iPhone.
Iyo FBI yakashandisa isingazivikanwe kushandisa kuwana iyo iPhone 5c
MuUnited States vanonongedzera kuboka iri revabiridzi se "grey hat" vane hunhu neruzivo zvavanopa hazvina chokwadi. Iyo "chena ngowani" (chena ngowani) ndivo vaongorori vanowana uye vataure nezvekukanganisika, chimwe chinhu icho chatakaona kakawanda kune vanobavha vanogadzira maturusi ekupwanya jeri, kunyangwe ivo vachingozviita kana vachinge vafunga kuti kukanganisa kwavakawana zvakashata. Kune rimwe divi, kune iyo "nhema ngowani" (nhema ngowani) vanoshandisa software bugs kuti vazvibatsire. Hats grey dzakawana iyi mhosho dzakazvitengesa, asi zvirinani kuti vakazvitengesa kune mumwe munhu uyo ​​mune dzidziso anogara achishandisa zvakanaka.
Kunyange iyo FBI kana Cellebrite Ivo havana kutaura chinhu pamusoro peiyi ruzivo rutsva. Kune rimwe divi, vatevedzi vemutemo vekuUS havafarire kuudza Apple kushupika kwavakashandisa. Kana vakadaro, Tim Cook nekambani hazvingatore nguva yakareba kugadzirisa dambudziko, kana izvo zvinofarirwa neFBI ndezvekuti aripo kumatambudziko anotevera. Apple yakati hazvingatorere FBI kumatare kuvamanikidza kuvaudza kuti vakawana sei iyo iPhone 5c, pamwe nekuti ivo vanoziva kare kuvamisa kuti vatore mukana wekutonga kwakadaro munguva pfupi iri kutevera. Tichaona kuti chii chinotevera chikamu chesepa opera Apple vs. FBI.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo FBI haina kubhadhara Cellebrite, asi pane "grey ngowani ngowani" boka kuvhura iro remagandanga iPhone 5c
Cellebrite Iranian kambani ????
Vhiki ine iyo iPhone SE: Iyo Kushuvira kweMana Inches
Iyo iPhone 7 inogona kuve neiri nani skrini kupfuura iyo Galaxy S7